Yini abalandeli be-HVLS abangayenza?
Thuthukisa Ukukhiqiza Kwabasebenzi
Kubukeka sengathi abalandeli be-HVLS abahlangene nakancane nokukhiqiza. Ngabe nje umlandeli angakuthuthukisa kanjani ukukhiqiza? Iqiniso ukuthi, abasebenzi abangakhululekile abasebenzi abangagxili. Imvelo yeHarsh kumele ibe nomthelela ekukhiqizeni kwabasebenzi.
Balance Amazinga okushisa
Umoya unenkambiso yokuhlukaniswa. Ngamanye amagama, ihlukaniswa ngezendlalelo ezihlukile zokushisa, nomoya oshisayo phezulu phezulu nomoya opholile phansi ngezansi.
Ungathola izimboni eziningi zifake usayizi omkhulu abalandeli be-high speed ukuze bahlale bepholile futhi benomoya.Nokho uma isivinini sifika ngaphezulu, ukuzamazama kakhulu.Sibone abaningi balolu hlobo lwamacala, isizathu mhlawumbe abalandeli bejubane eliphezulu behamba ngokushesha nokuphepha ucingo luyacindezela ukuhlupheka ngamandla ahambayo.Ngokungafani nabalandeli bejubane eliphezulu.
Uyokujabulela ukwazi ukuthi abalandeli be-OPT HVLS abadingi msebenzi wamanzi noma ukusebenza ngokubambisana nohlelo lwakho olukhona lwe-HVAC.
Akukona kuphela ukuthi umlandeli oyedwa we-OPT 24-foot HVLS angafaka abalandeli abangaphezulu kwamashumi amabili nambili abangama-36-intshi, abalandeli be-HVLS badinga ukunakekelwa okuncane kakhulu kunabalingani babo abancane. Bhangqa lokho ngempilo ende ende, futhi abalandeli be-HVLS bayincazelo yokutshalwa kwemali okuhle.
Izisebenzi ezikhiqizayo, ikhwalithi yokusungula ethembekile, ukunakekelwa okuncane, nezindleko zokushisa nokupholisa eziphansi kakhulu.